Semalt: Inosanganisira Mutemo Wemukati WeSelenium WebDriver MuGoogle Analytics
Pane imwe nguva, nzvimbo inoda kuongororwa kuti ione kugadzirisa maitiro. Selenium WebDriver uye Watir ndevamwe vezvikwata zvekushandisa zveUI zvakashandiswa zvakashandiswa. Vanokudziridza vanofanira, saka, vanoita pfungwa yekufunga kuti kuburikidza nekuwana nzvimbo, vanozoverengerawo sepakati pemugwagwa. Icho chakanaka kuti varege kubvisa motokari yakadaro kubva kuGoogle Analytics kudzivirira mitsara yakakanganiswa - arrampicata milano bambini baby.
Julia Vaishnava, Mutungamiriri Mukuru weVatengi Vekubudirira Semalt , anotaura kuti zviri nyore kubvisa marwadzo kubva kuSelenium kana zvichiitwa mumamiriro ekuedzwa. Mumwe anogona kushandisa GA zviratidzo kubva pakugadzirwa kuti aparadzanise data ye analytics. Imwe nzira ndeyekudzivisa kuwedzera kuG GA kusvika kune imwe sevha yekuedza.
Zvisinei, kana nyanzvi inoshandisa Selenium kurwisana nekugadzira, kune nzira shomanana kuburikidza iyo munhu anogona kubvisa magwagwa anowanikwa neGoogle Analytics. Zvimwe zvinoda kusabatanidzwa nemugwagwa chaiwo, asi vamwe vanoda shanduro yakakwana yeshoko re test Selenium.
1. Usabvisa IP / ISP. Muvandadzi anogona kugadzira tsika yekodzero yekero imwe ye IP kana huwandu hwavo, kana ISP kudzivirira kutora mukati mukati megwagwa. Matanho ekutevera ndeokuti:
Sarudza Admin, famba kuIndaneti uye sarudza Add Filter. Sarudza Kugadzira Futa Yatsva uye sarudza tsika yechimiro. Tsvaga iyo Bvisa bhatani uye sarudza.
Sarudza IP Address kubva pa filter filter uye neIndaneti kubva pane firiji.
Nzira yacho inogonawo kubudisa nzira dzisingabatanidzwi neSelenium zvakare..Kana munhu ari kuedza miedzo anoshandisa IP yakaoma kana kuti akaparidzira maitiro eCI, kuchengeta zvose zvavo muGoogle Analytics zvingaita kuti zvive zvinotyisa kwavari.
2. Tungamira Foni Dhiyabhorosi. Mumwe haafaniri kuchinja zvirongwa paGoogle Analytics. Vanogona kungodzivirira nzira kuenda kune sevha. Icho chinoreva kuti ivo vachafanirwa kuchinja faira yevaiti pane michina inoshandiswa kupedza miedzo. Inosanganisira kuwedzera kana kubvisa zvibvumirano zvemaitiro ekuedzwa. Iyo inodzivirira kufamba kwose kubva kune nzvimbo dzose, iyo isiri chinhu chakanaka chekuita panzvimbo.
2. Gadzira Mitambo Yevashandi Vekushandisa. Kuputira Site muGoogle Analytics kunoita kuti zvikwanise kugadzira kana mutemo ukasateerera nzira kubva kune vamwe vashandisi vachishandisa Selenium. Izvozvo zvinoshanda seimwe sarudzo inogadziriswa yekugadzirisa nechomukati chemotokari kubva kuSelenium test.
3. Purogiramu dzokusarudza. Google ine mapurogiramu ehurumende anopa muenzi wepaiti chisarudzo chokusarudza kubva kuGoogle Analytics. Kana munhu akaisa pirinji, ipapo Google haigoni kuunganidza kana kushandisa chero ruzivo kubva pane iyo site. Selenium haitangi kunze kwetsika add-ons yakaiswa, izvo zvinoreva kuti munhu anofanira kuwedzera kwavari.
4. Shandisa Proxy. BrowserMob ndiyo proxy inoshandiswa nevashambadziri sezvo ine sarudzo yekunyorera. Iyo inouya zvakanaka kana ichivhara data yakatumirwa kuGoogle Analytics.